Fihariana-Pam: tantsaha 200 tohanana any Androy sy Anôsy - ewa.mg
Fihariana-Pam: tantsaha 200 tohanana any Androy sy Anôsy
News - Fihariana-Pam: tantsaha 200 tohanana any Androy sy Anôsy
Mitohy ny fanatanterahana ny
paikady hanatanterahana ny velirano napetraky ny filoha Rajoelina.
Natao sonia, omaly, ny fiaraha-miombona antoka eo amin’ny
Fandaharanasa iraisam-pirenena momba ny sakafo (Pam) sy ny
fandaharanasa Fihariana. Tafiditra ao anatin’izany ny hanohanana ny
fikambanana sy ny vondrona tantsaha mpamokatra, tohanan’ny Pam,
ahazoan’izy ireo findramam-bola hanatsarana ny fihariany. Hahazo
tombontsoa amin’ity tohana ity ny any amin’ny faritra Androy sy
Anôsy, samy iasan’ny Pam sy ny Fihariana.
Manampy amin’ny ady amin’ny mosary
sy ny fahantrana ny Pam, raha manohana ny tantsaha mpamokatra
hitondra fampandrosoana ny faritra kosa ny Fihariana.
Miisa 200 ny tantsaha mpandraharaha
mivondrona anaty fikambanana hahazo tombontsoa amin’izao dingana
voalohany izao. Hisitraka ny tahan’ny zanabola ambany, ampiharin’ny
Fihariana, izy ireo. Tohanana teknika koa izy ireo ankoatra ny
findramam-bola. Mampiditra azy ireo hiditra amin’ny sehatry ny
ara-dalàna. Nilaza Rtoa mpandrindra nasionaly ny Fihariana, Rtoa
Zafindrazaka Valérie, fa mampiavaka ny Fihariana ny fanomezan-danja
ny maha olona sy ny fiarovana ny orinasa.
L’article Fihariana-Pam: tantsaha 200 tohanana any Androy sy Anôsy a été récupéré chez Newsmada.
Mode - News - Ao Raha
HETSIKA « MODUS MODE » :: Nahaliana tanora maro ny fampianarana milatro sy haingo
Nifarana ny alin’ny zoma teo tetsy amin’ny trano mala­laky ny Aft Andavamamba ilay hetsika “Modus Mode”, andiany faharoa. Mahakasika ny sehatry ny lamaody maro no nibahan-toerana nandritra ny telo andro nanaovana ny hetsika. Anisan’ny nahasarika tanora maro any fifana­kalo­zana traikefa teo amin’ireo mpaka sary lamaody matihanina sy ny fampianarana filatroana ary fampihaingoana ny tarehy izay nahafahan’ny olon-tsotra natrehina. Nahavariana ireo mpitsidika tsy mbola mahalala ny sehatry ny filatroana sy ny fanga­lan-tsary izany. Nahazo traikefa avokoa ireo izay nandalo tetsy Andavamamba nandritra ny telo andro nisiany hetsika. Mpikirakira lamaody fanta-daza sy manana ny maha izy azy, toa an’i Tantely Rakotoarivelo, MA Andrianalidera, Maforal, Toky Si, vahiny avy any ivelany sy ry zareo avy ao amin’ny Totem. Nampiseho ny fomba fandravahana ny endrika kosa ry zareo avy ao amin’ny Vero Vero. L’article HETSIKA « MODUS MODE » :: Nahaliana tanora maro ny fampianarana milatro sy haingo est apparu en premier sur AoRaha.
Fiverenan’ny “Alimbetso”: nafana ny takalon-javakanto tao Anjeva
Hetsika anisan’ny mampiavaka ny Faribolana Sandratra ny “Alimbetso”. Fandrehetana ilay afo mitondra hazavana sy hafanana sady fandrehetana ilay afom-pitiavana ny teny sy soratra ary zavakanto hafa ihany koa. Nanasongadina ireo ny tany Anjeva.Manomboka miverina tsikelikely ny hetsika zavakanto maro isan-karazany, akehitriny, na eo aza ny fisian’ny valanaretina Coronavirus eto Madagasikara sy maneran-tany. Nanomboka izany ny eo amin’ny tontolon’ny haisoratra Faribolana Sandratra sampana Anjeva. « Izay tsy mihetsika mihitsoka », araka ny teny fanevan’ny Faribolana Sandratra. Tontosa ny asabotsy teo tetsy Anjeva Gara ny « Alimbetso », nokarakarain’ny Faribolana Sandratra sampana Anjeva. Nanasana ireo mpanoratra sy poeta maro, nentina hanokafana ny hetsika sy fiombonam-po amin’ny fanandratana ny zavakanto, taorian’ity fanalefahana ireo fepetra tsy maintsy arahina noho ny hamehana ara-pahasalamana, araka ny nambaran’i Ras Varatra.Nafana ny takalo kanto, nifampizarana nandritra ny alina ka nitohy mandra-maraina. Tao ny fiantsana tononkalo, nataon-dry Liantsoa, i Mero Kosiky, Vina, i Mina Ilarion, i Endrik’aizina, sns. Tao koa ny fihirana ny takalo isan-karazany … Tsy hadino ny tsipy teny sy toromarika nomen’ireo zoky amin’ny fampivelarana ny kanto malagasy.Marihina fa tsy nanavahana fikambanana io hetsika io fa izay rehetra afaka ka te hanandratra ny haisoratra malagasy na mpankafy fotsiny aza, nasaina avokoa, araka ny nambaran’ny mpikarakara hatrany.I Endrik’aizina no mpandrindra ny sampana Faribolana Sandratra Anjeva, ankehitriny. Efa fomba fanaon’ny Faribolana Sandratra ampolo taona maro ny “Alimbetso”, hetsika ifampizarana ny zavakanto vita amin’ny teny izy io. Ivelarana bebe kokoa eo amin’ny samy mpanoratra… Sampana vao niforona tsy ela akory izay ny Faribolana Sandratra ao Anjeva kanefa efa manana ny maha izy azy noho ny finiavana sy ny fitiavana ny tontolon’ny soratra ananan’ny mpikambana tsirairay.NarilalaL’article Fiverenan’ny “Alimbetso”: nafana ny takalon-javakanto tao Anjeva a été récupéré chez Newsmada.
Fihantsiana tsotra izao: mitsoka kiririoka milaza ny fahatongavany ireo dahalo
Niditra an-keriny avy ao an-damosin’ny trano fivarotana lehibe indrindra ao Ambatosoratra ireo jiolahy. Nikiakiaka ny ankizivavikely iray, zanak’ilay mpivarotra, satria nalain’ireto olon-dratsy ho takalonaina fa tsy nanaiky nanoro ny misy ny vola ity tompon-trano. Nivoaka ny manodidina hamonjy… Tifitra basy no nahazo ilay raim-pianakaviana nivoaka voalohany ka maty! Daroka vatan-kazo no nanjo ny hafa, ny alin’ny alarobia 15 septambra no niseho izay.Endrika faharoa indray no niseho andro vitsivitsy talohan’io. Avy nangalatra omby tao Mangalaza, atsinanan’Ambatondrazaka ireo dahalo ka nandroaka ireo hazany nianandrefana tany Ambohidehilahy no sady nandroba fivarotana. Fotoana tsy ela manodidina izay, halatra omby sy fandrobana trano fivarotana koa no nahazo an’Antanambehivavy, Antanimena.Endrika fahatelo mikasika ny tsy fandriampahalemana any amin’iny distrikan’Ambatondrazaka iny tato ho ato, ny nitranga tao Ambohidava, tanàna lalovan’ny RN.44, 30km avaratr’io renivohitry ny distrika io. Misy nanamarika koa fa ny dahalo indray izao no mitsoka kiririoka ho filazana fa tonga handroba ry zareo….Fametrahana zandary, ampy isa honina sy ho vonona lalandava no soso-kevitra aroson’Antanimena satria lalan’ny mpitondry omby halatra iny toerana fizaran-tanin’ny distrikan’Amparafaravola sy Ambatondrazaka iny. Amin’ny ankapobeny, mila mikaroka fomba vaovao ny isan-tanàna, hiarovany ny ainy sy ny fananany, andro aman’alina mihitsy.RarivoL’article Fihantsiana tsotra izao: mitsoka kiririoka milaza ny fahatongavany ireo dahalo a été récupéré chez Newsmada.
Atletisma: medaly volamena 5 indray noraofin’ny Malagasy
Mitohy hatrany ny fahombiazana ho an’ny atleta malagasy miatrika ny Lalaon’ny Nosy, tanterahina aty Maorisy. Ho an’ny omaly, nirara-draraka ny fandrombahana medaly volamena, teo amin’ireo taranja atletisma, medaly volamena 5 be izao no azon’ny atletantsika, tamin’ny alalan-dRaherinaivokoloina Ianjaly, ho an’ny 400m, nahavita ny fifaninanana, tao anatin’ny 56.94. Teo koa i Fiadanantsoa Sidonie, nahazo ny laharana voalohany teo amin’ny 100m haies vehivavy, nahavita ny halavirana 14.35. Marihina, sambany vao nandray anjara tamin’ny lalao ngezabe toy izao ity atleta ity, izay tsorina fa mbola manana ny hoaviny.Mbola namiratra ny atleta malagasy vehivavy amin’ny 200m, lasan’i Nomenjanahary Njarasoa Claudine ny medaly volamena, nahavita ny halavirana tao anatin’ny 25.28. Ho an’ny halavirana 3000 steeple indray, mbola nanjakan’ny atleta malagasy, izay nahazo ny laharana roa voalohany, ka Ramiandrisoa Mbolatiana no nandrombaka ny medaly volamena, nahavita ny fifaninanana tao anatin’ny 10.52.04 raha 11.01.97 kosa no namitan-d Ralisinirina Tsiadino Marthe, izany ka nahazoany ny medaly volafotsy. Ho an’ny sokajy 400m lehilahy, mbola nandrombaka medaly volamena Rabearison Franck Honoré, nahavita ny halavirana tao anatin’ny 47.79, fanindroany amin’izao no nandraisana anjara tamin’ny Lalaon’ny Nosy, ka medaly volafotsy no azony tany La Réunion. Mbola hitohy anio moa ny fifaninanana atletisma. Mi.RazL’article Atletisma: medaly volamena 5 indray noraofin’ny Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Nitoroka ny tsy fanarahana ny andininy faha-161, faha-162 ary faha-163 ao amin’ny Lalàm-panorenana mahakasika ny fanapahan-kevitry ny fitondrana hanao an’izao fitsapan-kevi-bahoaka hanitsy ny Lalàm-panorenana izao ny vondrona politika Dina Iombonan- kevitra (Dinike), teny Ankadivato, omaly. Toherin’izy ireo ny fanaovana ny fitsapan-kevi-bahoaka amin’ny 27 mey ho avy izao, indrindra ny fifanitsahan’izany amin’ny fifidianana depiote. Miantso ireo fahefana mahefa izy ireo hanaja ny fampiharana ny lalàna. L’article Fanoherana est apparu en premier sur AoRaha.
Nanao ny tratry ny heriny ihany ny fokonolona tamin’ny famonjena azy ireo, saingy tsy avotra ny an’izy efatra mirahalahy. Maty sempotra raha nilatsaka tao anaty lavapiringa nodioviny, somary lalindalina. Adiny roa taorian’ny nitrangan’ny loza vao tafakatra ireo razana.Tsy nampoizina ! Izany tokoa rehefa ho avy ny loza. Efa-dahy (mpiray tampo ny telo raha fianakaviana akaiky azy telo ny iray) indray maty tsy tra-drano nihotsahan’ny tany tao anaty lavapiringa, omaly, tao Ambatondrazaka. Nanadio lavapiringa « WC fosse septique » tao amin’ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ambohimiangaly Ambatondrazaka izy efa-dahy ireto. Efa tafakatra teny ambony izy ireo no nahatsikaritra ny iray fa nisy hadino tao anaty lavaka ny fitaovana nampiasain’izy ireo. Niverina naka izany tao anaty lavaka ny iray ka tamin’izany indrindra no nahalatsaka azy tampoka tao anaty lavaka. Nikoropaka ireo namany raha nahita ilay namany iray latsaka. Nanao ny ho afany ireo namany telo lahy nanavotra ilay tovolahy, saingy nisolifatra tampoka ihany koa rehefa niezaka nanavotra azy. Vokany, samy niara-latsaka tao anaty lavaka avokoa izy efa-dahy.Nanahirana ny fisokirana ny razana…Niezaka nifanome tanana tamin’ny fampiakarana ny razana ny mpitandro filaminana nampian’ny fokonolona tao an-tanànan, saingy nananosarotra anefa izany noho ny halalin’ny lavaka. Teo koa ny tsy fahampian’ny fitaovana teo am-pelatanana nentina nampiakarana ny razana. Tohatra no nampiasaina nentin’ireo mpanavotra nampiakatra ny razana avy ao anaty lavaka. Naharitra teo amin’ny adiny roa teo izany. Taorian’izay, efa natolotra ny fianakaviana ny razana. Mandeha kosa ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana momba ity raharaha ity. Matetika misedra olana hatrany ny mpanadio ireny lavapiringa sy mpanamboatra sy/na mpanadio lava-drano ireny. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany satria tampoka ny fiavian’ny loza. Araka ny fandinihan’ny manam-pahaizana, raha vao mihoatra ny 10 metatra ny halalin’ny lavaka dia misy gazy manempotra sy mahafaty tampoka any ambanin’ny tany.J.CL’article Adiny roa vao tafavoaka ireo razana: efa-dahy maty nianjera tao anaty… lavapiringa a été récupéré chez Newsmada.
Imbiki Herilaza : “Tsy ny isa no zava-dehibe”
“Raha haintsika ny manaja ary mampiasa ny lalàmpanorenana sy ny lalàna rehetra, tsy ny isa no zava-dehibe fa ny voka-tsoa entin’izay zavatra izay. Eo amin’izay takin’ny firenena izany, indrindra eo amin’ny andavanandrom-piainan’ny vahoaka malagasy.”Io ny nambaran’ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, manoloana ny adihevitra ny amin’ny fifidianana loholona hatao ny 11 desambra, hampihenana ny isan’ny loholona hofidina.Amin’ny firenena toa an’i Madagasikara izay fitondrana “semi-parlemantaire”, miainga avy amin’izay maro anisa eo anivon’ny Antenimierampirenena ny praiminisitra: tsara raha mitovy foto-kevitra amin’ny filohan’ny Repoblika ny parlemanta. Tsy midika izay hoe tsy misy intsony ny asa fanaraha-maso ataon’ny mpanao lalàna amin’ny fahefana mpanatanteraka. Izay ny fifandanjan-kery eo amin’ny fahefana.Na mitovy firehan-kevitra politika aza, misy hatrany ny asa fanaraha-maso ny fahefana mpanatanteraka eo anivon’ny parlemanta. Tokony ho hain’ny parlemantera ny mandanjalanja an’izay, araka ny fanazavany.R.Nd. L’article Imbiki Herilaza : “Tsy ny isa no zava-dehibe” a été récupéré chez Newsmada.